Coronavirus Youraya Vanhu Vanodarika Mazana Mana muAfrica
Zimbabwe nhasi yapinda muzuva rechipfumbamwe vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvitatu pasi rose.
MuZimbabwe mune vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi uye mumwe chete akafa.Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvehutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi vati vari kutyira zvikuru kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu vakabva kuSouth Africa painge ponzi vanhu munyika iyi vagare mudzimba vanogona kuwedzera huwandu hwevanhu vachabatwa nechirwere ichi munyika.
Vatiwo huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hunogona kunge wakaderera nekuti varikuvhenekwa vachiri vashoma.
Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere reAfrica Centres for Disease Control Prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu vanodarika mazana mana nemakumi mana nevaviri.
Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mana uye vakawanda vacho vari muSouth Africa umo mafawo vanhu gumi nemumwe chete kusvika parizvino.
Dunhu reSADC rine vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu vabatwa nechirwere ichi.
Asi kunyika dzekumawirira ndiko kune vanhu vakawandisa vabatwaJohns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora chirwere ichi inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vabatwa nechirwere ichi.
America iyo ine vanhu vanodarika zviuru gumi vafa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kunyangwe vakawanda vafa pasi rose vachiri vekuItaly kwashaya vanhu vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu.
Mutungamiri wehurumende yeBritain VaBoris Johnson avo vakabatwa nechirwere ichi vaendeswa kunorapwa vari kurwarisa kana kuti Intensive Care Unit mushure mekusimbirwa zvakanyanya nechirwere ichi.
Kunyangwe zviri pachena kuti kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kunobatsira kuderedza huwandu hwevanhu vanofa nechirwere ichi, vamwe muZimbabwe vave kugunun’una kuti vave kufa nenzara sezvo vemabhizimisi vakawedzera mitengo yezvekudya zvakanyanya.